. Araka ny fitantaran’ity renim-pianakaviana ity dia eo ny resaka hosoka famindram-pananana na “mutation frauduleuse” ny tananan’izy ireo antsoina hoe “Tanisoa mahavelona”. Nanaovana vehivavy iray taratasy hosoka misy sonia hosok’ity vehivavy milaza ho lasibatra ity izy io, raha ny fanazavana. Ny 27 janoary 2020 no efa nitaraina teny amin’ny zandarimaria eny amin’ny toby Ratsimandrava izahay, hoy ity renim-pianakaviana ity. 3 andro taorian’izay dia nandeha ny fanalana azy ireo tamin’ny tranony. Zandary avy amin’ny kaompanian’Ambohidratrimo miisa 14 lahy fa tsy ny zandary avy eo Mandrosoa anefa no nanala azy ireo tao. Tsy nahazo fampandrenesana na ity fianakaviana ity na ny fokontany. Nataon’ilay nibodo amboletra koa ny fiara 4x4 land cruizern’ireto fianakaviana ireto tamin’io fotoana io. Fanagiazana mandra-paha voaloha ny “dommage interet” ialana amin’ilay trano io, izany ilay lasibatra indray no nolazaina fa nibodo, raha ny fanazavana hatrany. Tsy misy ara-dalana ny taratasy fa fakana am-bavany na PV efa vita avy any, hoy ity mitaraina ity, no noterena ho nosoniaviny. Mitentina 15 tapitrisa ariary io “dommage” noterena aloha io ary mbola noterena nalohan’izy ireo koa ny saran’ny fampiasana vadintany tamin’io andro io izay mitentina 10.800.000 ariary miampy ilay fanagiazana fiara hoe ho atao lavanty ny 20 febroary teo. Tsy tanteraka moa izany hatramin’izao vokatry ny fanohanana nataonay, hoy izy. Nomarihiny moa fa ny alin’ny 24 desambra 2019 no nisy fanafihana nihatra tamin’ity fianakaviana ity. Tokony tamin’ny 3 ora maraina dia nisy 3 lahy niditra tao amin’ny tranon’izy ireo ary tsy nisy na inona na inona simba fa tsy fantatra izay nahatafiditra azy ireo tao. Nofatoran’izy ireo sy notapenany ny vavan’ny ramoseko. Naolan’izy ireo ihany koa ny zanako, hoy izy. Ny nahagaga, hoy ity ramatoa ity, dia nahita marika na “piste” sy porofo maro izahay na mikasika ny fibodoana na mikasika ilay fanolanana saingy nifototra tamin’izy ireo indray izany. Ho hita eo ny tohin’ny raharaha.